Kwokuwana Europe Most Magnificent Architecture | Save A Train
musha > Travel Europe > Kwokuwana Europe Most Magnificent Architecture
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi(Last Updated On: 05/12/2020)
Kutarira kuona zvimwe wakanaka mavakirwo uri inotevera pazororo? kana zvakadaro, pane zvimwe zviri pasina nzvimbo kupfuura Europe iwe. Ungave uchida dzekare mapurani zvitaera kana vachitarisira kuwana zvimwe asinganyanyi kuzivikanwa zvishongo, Maguta European iwe akafukidzwa. Ngatidyei timboona mienzaniso yakanaka kwazvo mapurani uye apo vachiiona zvose:
Magnificent Architecture: Itari
Itari izere maguta nemisha maduku apo unogona kurasika vachichengeta ezvivako. Ungave uri Rome kana Florence, anenge ose rekona ndewe mufananidzo. For vashanyi kutsvaka naka mumataundi maduku, Vicenza ndiye kurudyi rwendo. It kuti pedyo kana uri achitora chitima kuenda kana kubva Venice, riri inokosha kushanya. Nepo Vincenza ari famed ayo Renaissance akitekicha Style akanambwa mupfungwa Andrea Palladio, Venetian akitekicha kazhinji Gothic, Tsanangura, uye yakanaka.
Pakati mamwe maguta Italian haugoni kurasikirwa, Roma uye Florence uyewo kumira kunze sezvo favorite. Roma ndiyo ainyanya azere varipo munhu wose anofanira kuona kamwe muupenyu hwavo. The yeColosseum, St. Petro Basilica, Pantheon, uye patsime reTrevi zvese zvakakodzera kushanyirwa. Pane rimwe divi, Florence ane musanganiswa akasiyana zvitaera, zvikuru zvikurukuru Greek yekare uye mapurani Roman, Gothic uye Renaissance.
Magnificent Architecture: Furanzi
France ndiyo musha kuti maguta mashoma-siyana siyana kuti achasiya chero Magnificent Architecture anoda kufema. Pakati chikuru vaida kuti kushanya, Strasbourg, Bordeaux, uye Paris zvichida kupa kupfuura.
Pane zvakawanda kuona uye itai muStrasbourg, kusanganisira zvinokosha mienzaniso Gothic mapurani, zvakanyatsobatana ano uye postmodern nemaruwa uye Alsatian mapurani. Bordeaux akasiyanawo nevamwe. Guta guru pane ose ari Aquitania nharaunda unozvirumbidza munhu nakisisa remakore rechi18 dzomumaguta mapazi, Mumuzinda Bourse, uye Cathedral Saint Andre. pakupedzisira, Paris ndiye wakakurumbira somumwe birthplaces ose Gothic mapurani, asi akapfuma mune mienzaniso dzakasiyana-siyana Belle Epoque uye Art itsva.
Kune vari zvakawanda mapurani anokosha kuti inowanikwa Jerimani. zvisinei, maviri unoyevedza zvikuru ndivo vari Berlin uye rothenburg. Architecture Kazhinji anoenda ruoko munhoroondo, uye iwe unogona kuona kubatana ichi zvakajeka muBerlin. The guta yave chakakamurwa kamwe, uye izvozvo zvakajeka kuoneka dzimwe nzvimbo. Kuti zvinoita nzvimbo huru ruzivo siyana zvinhu mapurani uye svetuka zvakadzama nhoroondo kunechekuita ounyanzvi.
Pane rimwe divi, Rothenburg inzvimbo vachitarisa akafanana zvakaitika ngaatarire kubva munhu upenyu hwaAbhigairi ngano. This kotsira, Ages-achitarisa guta riri mushanyi chandinodisisa. Ndicho chinhu chikuru muenzaniso kwezvokufuka European Ages mavakirwo ayo namasvingo muguta uye gabled pamatenga.
Stuttgart kuna rothenburg Zvitima
MuNuremberg kuna rothenburg Zvitima
Europe ndewe achipfuura, uye pane dzimwe nzvimbo dzakawanda dzakanaka kuti unofanira kuedza kushanyira. akitekicha Anoshamisa ane England, Bherujiyamu, Ositiriya, Siwidheni, uye Netharenzi naizvo.
Kana wagadzirira bhuku rako chitima matikiti mapurani kuona-kuona rwendo hope dzako, ndotarira dzokugara dzako Kuponesa Train.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmagnificent-architecture%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Belgium, Chitima Kufamba Denmark, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Scotland, Rovedza Kufamba Spain, Chitima Kufamba UK, Travel Europe